देशभर ९ हजार १ सय ६१ जना क्वारेन्टाइनमा – Health Post Nepal
देशभर ९ हजार १ सय ६१ जना क्वारेन्टाइनमा
२०७६ चैत २४ गते १६:५२
कोरोना भाइरसको आंशकामा देशभर ९ हजार १ सय ६१ जना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलन मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले देशभर नै ९ हजार १ सय ६१ जना क्वारेन्टाइनमा रहेको बताए ।
उनका अनुसार कैलाली, कञ्चनपुर र बाग्लुङ जिल्लामा कोरोनाको तीव्र र्यापिड टेष्ट गर्ने परीक्षणका लागि टोली खटाएको जानकारी दिए । प्रवक्ता डा.देवकोटाका अनुसार कैलाली, कञ्चनपुर र बाग्लुङ क्वारेन्टाइनमा रहेका सबै व्यक्तिहरुको कोरोना परीक्षण हुनेछ । चैत महिनामा आएका र उनीहरुको सम्पर्कमा आएकाहरुको र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेष्टमा गरिने डा. देवकोटाले बताए ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा १ हजार ६ सय ९७ नुमनाको परिक्षण भएको छ । धुलिखेल, भरतपुर भैरवहा सोमबारबाट नमुना परिक्षण सुरु भएको डा. देवकोटाले बताए । काठमाडौं उपत्यका १ र उपत्यका बाहिर गरि १० ठाउँबाट नमुना परिक्षण सुरु भएको उनले बताए । उपत्यका १२ र उपत्यका बाहिर ९७ जना रहेको आइसोलेसनमा रहेका छन् ।